Vedzisvondo Votambira Kurudziro yaVaMnangagwa Yekuti Vasaungana
Reverend Kenneth Mtata, the secretary general of Zimbabwe Council of Churches, said his organization notes that Christians make up more than 80 percent of the country’s population. Mtata is shown in June 2017. (S. Mhofu/VOA)
Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira chirwere cheCoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasaungane mudzimba vari vashoma.
VaMtata vati nekuda kwekuti mutungamiriri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika sezviri mubumbiro remitemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikavamo munyika, chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori, weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, unotiwo uri kutevedzeraeo zvakatarwa nemutungamiri wenyika.
Munyori musangano iri, VaEdison Tsvakayi, vati vari kukurudzira machechi echipositori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza hutano hwenhengo dzavo.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference, Va Fraderick Chiromba, avo vatiwo vatonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza hutano hwevatenderi.
VaChiromba vati seRoman Catholic vatomisa dzimwe tsika dzavaiita mukerekere mavo dzingangokonzera kupararira kwechirwere ichi kana chikapinda munyika dzakaiya sekupanana chiratidzo cherugare apo vanhu vanobatana maoko pamwe nekubvisa mvura inozorwa pamisuwo yechechi kana munhu achipinda.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny, Bishop Ancellimo Magaya, vati vachiri kuongorora kuti votora matanho api.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kuzvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuitwa kupera kwevhiki rino.
Gurukota rezvehutano, VaObadiah Moyo vakaudza vatori venhau neMuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero.
Chirwere che Covid 19 chakatanga kuChina muna Zvita gore rapera, uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira dzemuAfrica.
Pasi rose, vanhu vanodarika zviuru zvisere vafa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi.